Midowga Yurub oo War kasoo saaray Doorashadii ka dhacday Somaliland | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Midowga Yurub oo War kasoo saaray Doorashadii ka dhacday Somaliland
Midowga Yurub oo War kasoo saaray Doorashadii ka dhacday Somaliland
Midowga Yurub ayaa War kasoo saartay doorashooyinkii Golaha Wakiilada iyo Golaha deegaanka Somaliland oo 31 bishii lasoo dhaafay May ka dhacday deegaanada Somaliland.
Hadal-qoraal ah oo kasoo baxay Midowga Yurub ayaa lagu soo dhaweeyay qaabka ay u dhacday doorashadii qofka iyo Codka aheyd ee Somaliland iyo natiijadii ka soo baxday, iyagoona boggaadiyay shacabkii coddeeyay.
Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay oo kaliya in Haween ay ku soo bixi waayeen doorashadii Golaha Wakiilada Somaliland, halka Golaha deegaanka ay kamid noqdeen oo kaliya saddex Haween oo tartamay.
Sidoo kale Midowga ayaa xusay inay sugayaan tallaabooyin deg deg ah oo la taaban karo oo ay qaadan Xildhibaanada Baarlamaanka cusub, si loo hubiyo in metelaad caddaalad ah ay haweenku ku yeeshaan maamulka.
“Waxaan sugeynaa tallaabooyin deg deg ah oo la taaban karo oo ka yimaadda Baarlamaanka cusub iyo xukuumadda si loo hubiyo in metelaad caddaalad ah ay haweenku ku yeeshaan maamulka” ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxay Xafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya.
In ka badan hal milyan oo qof Somaliland ah ayaa u coddeeyay 82 Xildhibaan oo ku tartameysay Golaha Wakiilada iyo 249 Mudane oo u tartameysay Golaha deegaanka, waxaana qarashka ku baxay Doorashada %20 bixiyay Midowga Yurub.
Maqaal horeDowladda oo ka hadashay waqtiga xariga laga jarayo Jidka Muqdisho iyo Afgooye
Maqaal XigaCumar Filish oo dhagax dhigay Xarun Degmo oo dib u dhis lagu sameynayo